Ukuzenzekelayo ekhaya, vula ucango lwendlu nge-iPhone yakho | IPhone iindaba
Ukuzenzekelayo kwasekhaya, vula ucango lwendlu nge-iPhone yakho
Sonke siqhele ukusebenzisa iremote ukuvula imoto, kwaye abanye nokuba likhadi elisondeleyo ukuyivula, sisebenzisa amakhadi okufikelela emsebenzini, kwiihotele, njl., Kutheni ke siqhubeka nayo? isitshixo sezitshixo zokungena ekhaya?
Ndihlala ndicinga ukuba ngesiqhelo ivelisa ndiziva ndingenakuzinceda ukuba nesixhobo unokuqhekeka njengomgcini wephupha lakho, kodwa nayiphi na inkqubo oyifakayo, isela elifuna ukungena liya kuthanda Nokuba ubeka umlindi kufikelelo ngalunye.
Zininzi iindlela ezikhoyo kule nkqubo, kodwa zimbini ezizodwa kukhuseleko lwabo kunye nokulula kofakelo. Nge-Agasti kunye no-Kevo babetha ibhalansi phakathi kokuthembeka kunye nokusebenza, bobabini bemi ngaphandle kwelitshi ngaphandle njengoko kugcina ukhetho oluphambili.
EyeThupha yinkqubo ethi ukufakwa kwimizuzu engama-20, Kulula ukuyisebenzisa kuba yinto nje enesilinda engqindilili yealuminium efakwe kwindawo enye apho ikhiya yakho yangaphandle yayingaphakathi, ngaphakathi kukho inkqubo Bluetooth, iibhetri kunye imoto yomelele ngokwaneleyo ukuze isebenze iqhaga. Ukuyitshixa xa ungaphakathi kwaye awufuni kuphazanyiswa kufuneka ujike isilinda njenge-latch eqhelekileyo.
Ikhatshwa ngu isicelo samahhala ye-iPhone kunye ne-Android ekuvumela ukuba uchonge ukuvunywa kwezokhuseleko. Nge-app, inokusetwa ukuba ivule ngokuzenzekelayo ngaphandle kokuchukumisa ifowuni; olunye uqwalaselo olukhethiweyo luvumela usetyenziso yazi xa usondela emnyango ovela ngaphandle kwaye uvule.
Ixabiso li IRandi ye249,99 kwaye ungayithenga kwifayile ye- iwebhusayithi.
Kevo buyisela iqhaga lonke, ephelisa imiba yokuhambelana. Udinga i-Kwikset deadbolt kwaye kunye nemoto, iibhetri, unomathotholo weBluetooth kunye nesenzi senzwa, ipakethi epheleleyo sele ikho. Kuthatha ixesha elincinci ukufakela, kodwa iziphumo zingcono kakhulu.
Izixhobo ezongezelelweyo zivumela ukutshixa okanye ukuvula, Kufuneka ubambe nje ibhawudi ngomnwe wakho xa ifowuni egunyazisiweyo (okanye isitshixo fob) ikufuphi. Awusoze uyikhuphe ifowuni yakho epokothweni okanye uvule usetyenziso. Oku akuthethi ukuba ayikho, iyasebenza, kodwa iyasetyenziswa ukunika ugunyaziso kumaqhosha ethutyana.
Ixabiso li Iidola ezingama-219,95 kwaye ungayithenga nge nabaphi na aba basasazi.
Kwenzeka ntoni ukuba ibhetri yefowuni yakho ifile?
La isitshixo somzimba sisasebenza, ukuze ugcine ezinye zikhona. UKevo ubandakanya i-fob yesitshixo sokulawula kude ngaphandle kwamacingo U-Agasti uceba ukusebenza nezinye izixhobo zeBluetooth kwaye ke uqhubeke nokuvula ngokusondela.
Kwenzeka ntoni ukuba ibhetri kwinkqubo yokutshixa iyaphela?
Bobabini uAgasti noKevo beza neebhetri ezine zeAA ekufuneka zihlale unyaka. Izicelo ezihambelanayo ziya kuthi uya kulumkisa xa bephantsi. Ukuba isilela, isitshixo somzimba sihlala sihleli.
Kwenzeka ntoni ukuba ulahlekelwe yifowuni yakho?
Unako ukufikelela kwenye ikhompyutha kwaye ungene kwiakhawunti yakho ukususa amandla okuvula ifowuni elahlekileyo.
Kwenzeka ntoni ukuba isitshixo semoto siyasilela?
Imoto eKevo yakhelwe ukuhlala ubuncinci Ukusetyenziswa kwamawaka angama-50 kwaye uAgasti uthi iqhaga lakhe lingayibetha Ukusetyenziswa okungama-100.000. Isitshixo esidala sinokugqitha kwi-injini efileyo.
Yintoni enokwenzeka kuhlaselo lwehacker?
Akukho nto, zombini iinkqubo zixhuma kwi-Intanethi ngefowuni, ke ungakhathaleli kugcino. Ukusetyenziswa kwayo kusekwe kwiBluetooth, iyenza ukuba ibe yeyona nkqubo ikhuselekileyo ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izixhobo ze-IP » Ukuzenzekelayo kwasekhaya, vula ucango lwendlu nge-iPhone yakho
Zintle kakhulu kodwa zisebenza kuphela nge-American locks. Ngethemba lokuba ngenye imini baya kukhonza kwiimodeli esinazo eYurophu.
Ewe, kule meko zizitshixo zaseYurophu. Azifanelekanga eziqhelekileyo zaseMelika. Thatha uhambo, ukuba unomdla, kwiiwebhu. Ukubulisa
kwimizuzwana nje embalwa ...
Isitshixo senziwe kuphela ngokuchukumisa ukuba umnxeba ogunyazisiweyo ukufuphi, ukuya kuthi ga kuwuphi umgama?
Khuphela amaphephadonga ngehardware ye-iPhone 6